आशाको सञ्चार गर्ने तीन खोप, कहिले कम होला कोरोनाको गती ? « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » आशाको सञ्चार गर्ने तीन खोप, कहिले कम होला कोरोनाको गती ?
आशाको सञ्चार गर्ने तीन खोप, कहिले कम होला कोरोनाको गती ?
एजेन्सी काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी तत्काल नियन्त्रणमा आउने सम्भावना नदेखिएपनि केही खोप निर्माणका सकारात्मक प्रयासले भने आशावादी बनाएको छ । महामारीको एक मात्र उत्तम विकल्पका रुपमा खोप रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) तथा स्वास्थ्य विज्ञले बताउँदैगर्दा केही वैज्ञानिकहरुले तीव्र रुपमा काम गरेर छिट्टै खोप आउने आशा जगाएका हुन् ।